Seychelles leaving ecological print this Environment Day with Global Impact Network | Seychelles travel news
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Seychelles waxay ka tagaysaa daabacaadda bey'ada maalintan Deegaanka ee Shabakadda Saamaynta Caalamiga
Arimaha Dowlada • Warka Warshadaha Martigelinta • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Warka Dalxiiska ee Masuulka ah • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka
Seychelles waxay ka tagaysaa daabacaadda bey'ada maalintan Deegaanka ee Shabakadda Saamaynta Caalamiga
Seychelles maalinta Deegaanka Adduunka
Golaha Dalxiiska Seychelles (STB) wuxuu bilaabay iskaashi uu la yeesho Shabakadda Caalamiga ah ee Saamaynta Maanta, Jimcaha, Juun 4, 2021, kuna beegan howlaha socdaalka ee Maalinta Deegaanka Adduunka, oo loo dabaaldegay 5ta Juun.
Shabakadda Saameynta Cilmiga Caalamiga ah waxay u oggolaaneysaa qof walba inuu tallaabo ka qaado meel kasta sababo la xiriira cilmiga deegaanka.
Seychelles waa meesha ugu horeysa ee loo socdo abuurista boggeeda bulshada ee khadka tooska ah ee Shabakadda.
Meesha loo socdo waxay dooneysaa martideeda inay la kulmaan khibrad qoto dheer inta ay fasaxa yihiin oo si shaqsi ah loo beddelo dhamaadka safarkooda.
Iskaashigu wuxuu u oggolaanayaa Seychelles inay noqoto, si rasmi ah, meesha ugu horreysa ee laga abuuro boggeeda bulshada ee khadka tooska ah ee barta 'Global Impact Network platform'.
Shabakadda Global Impact Network waa barnaamij u oggolaanaya shakhsiyaadka iyo ururada inay tallaabo ka qaadaan meel kasta iyo sababo kasta oo u janjeedha deegaan ahaan. Seychelles, Horyaalka waarta ee Badweynta Hindiya, wuxuu ku biirayaa barxadda si uu ugu soo jiito booqdayaasheeda inay yeeshaan waayo-aragnimo qoto dheer inta ay ku jiraan fasaxa halka loo socdo iyo in shaqsi ahaan loo beddelo dhammaadka safarkooda.
Barmaamijka dhijitaalka ah wuxuu u oggolaan doonaa dadka isticmaala inay la socdaan, cabbiraan oo ay soo bandhigaan ficillo waara iyada oo loo marayo madadaalo iyo caqabado la gaari karo oo ku saabsan arrimaha dunida dhabta ah.
Munaasabadan ayaa waxaa lagu bilaabay xaflad dhirayn ah oo ka dhacday Maison Quéau de Quinssy gardens by Wasiirka Arimaha Dibada iyo Dalxiiska, Mr. Sylvestre Radegonde, iyadoo ay goobjoog ahaayeen xoghayaha guud ee arimaha dibada, Ambassador Vivianne Fock Tave iyo xoghayaha guud ee Dalxiiska Mrs. Anne Lafortune.
Xaflada dhiraynta waxaa xigay bandhigyo ay sameeyeen madaxa fulinta STB Mrs. Sherin Francis iyo agaasimaha guud ee Global Impact Network, Ms. Tatianna Sharpe.